FITSIDIHANA NY FIM 2016 – Mahalala zavatra tsy ampoizina ireo mpianatra avy any ambanivohitra - Ministère de l'Education Nationale
Kilasy famaranana ao amin’ny lisea Soalandy Ankadivoribe i Sitraka Floriant RAKOTOARIVELO. Hiatrika ny fanadinana baccalautérat sokajy A2 izy amin’ity taona ity. Isan’ireo mpianatra 200 nentin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenana (MEN), hijery ny Foara Iraisam-pirenana eto Madagasika 2016, fantatra ami ‘ny fanafohezan-teny hoe “FIM 2016” ny tovolahy.
Tsotra ny endrika fahitana azy avy ety ivelany, na amin’ny fomba fiakanjo izany na amin’ny fihetsika. Tsy mbola manana kaonty ao amin’ny tambazotra sosialy Facebook I Florian. Tsy mampiasa finday sy adresy mailaka, nefa fantany mazava tsara kosa ny zavatra andrasany sy tiany ho hita, mandritra ny FIM 2016. “ Tari-dalana amin’ny asa mety ho hataoko any aoriana sy amin’ny fianarana mety ho azo hatohizana rehefa afaka fanadinana no tena andrasako. Te hahita sy hamantatra bebekoa ireo seha-pihariana efa miroborobo sy tsy mitsahatra ny miroborobo ihany koa ny tenako ka tsy maintsy hiompana amin’izany ny fitsidihana hataoko”, hoy ny fanazavany.
Na dia sambany aza ity mpianatra ity no mitsidika fampirantina tahaka itony, dia toa efa mahalala zavatra maromaro mahakasika izany, raha nanontaniana. Santionany amin’izany ny fahafantarany fa “Foire Internationale de Madagascar” ny fanalavana ny FIM, ary andiany faha 11 izy amin’ity taona 2016 ity.